Toromarika avy amin’Andriamanitra
“Mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’i Jesosy Tompontsika, ary hianareo ao aminy kosa, araka ny fahasoavan’Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo”. 2 Tes. 1:12
Maro no maniry te hitombo amin’ny fahasoavana ; mivavaka ny amin’izany izy, ary gaga fa tsy voavaly ny vavaka nataony. Nanome asa ho azy izay hahafahany mitombo ny Tompo. Midika inona moa ny vavaka raha toa ka ny miasa no tokony atao? Izao no fanontaniana mipetraka: moa va izy ireo mitady ny fanahy izay nahafatesan’i Kristy? Ny fitomboana ara-panahy dia miankina amin’ny fizarana amin’ny hafa ny fahazavana efa nomen’Andriamanitra anao. Aoka ianao ampiasa ny eritreritrao tsara indrindra amin’ny asa mazoto hanao soa ary ny soa irery ihany ho an’ny fianakavianao sy ny fiangonanao ary ny manodidina anao.
Ho solon’ny ahiahinao andrao tsy hitombo amin’ny fahasoavana, dia ataovy ny adidy takin’izany, ento ny vesatry ny fanahy mitambesatra ao am-ponao, ary ataovy ny fomba rehetra azonao atao mba hamonjena ny very. Miraisa saina ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpiarahalahy ; mitenena amin’ny fanetren-tenan’ilay fanantenana finaritra; miresaha momba ny fitiavan’i Kristy; resaho ny fahasoavany, ny famindrampony ary ny fahamarinany; ary atsaharo ny ahiahy ny amin’ny mitombo amin’ny fahasoavana ve ianao na tsia.
Raha manokana ny fo sy ny saina hanao ny asan’Andriamanitra isika, ka manao ny asa asainy hataontsika sy manaraka ny dian-tongotr’i Jesosy , dia ho valiha masina ny fontsika, ka ny tady tsirairay eo aminy dia hanandratra fiderana sy fisaorana Ilay Zanak’ondry nirahin’Andriamanitra hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.
I Jesosy Tompo no hery sy hasambarana ho antsika – ilay fitoeram-bokatra lehibe izay azontsika hanovozana hery amin’ny fotoana rehetra. Rehefa madinika Azy isika, miresaka ny momba Azy, ka vao mainka afaka mibanjina Azy hatrany hatrany – rehefa mandray ny fahasoavana sy ny fitahiana atolony isika, dia manana zavatra azontsika ampiasaina hanampiana ny hafa. Feno fankasitrahana isika ka mampita ny hafa ny fiahiana izay nomena antsika maimmaimpoana . Koa amin’ny fandraisana sy fizarana toy izany no hitomboantsika amin’ny fahasoavana.